Mibilaogy ny nofy: Paikady sy fanamby · Global Voices teny Malagasy
Mibilaogy ny nofy: Paikady sy fanamby
Voadika ny 26 Avrily 2018 3:55 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Mey taona 2009 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nahavita ny asany ny Blogging the Dream (Mibilaogy ny nofy) an'ny Fikambanana Orizonturi ary mandroso hatrany sy manitatra ny klioba Bilaoginy (Blogging Club).
Natomboky ny Fikambanana Orizonturi (Fikambanana Faravodilanitra amin'ny teny gasy) tamin'ny fararano lasa teo ny tetikasa, izay vatsian'ny Rising Voices ara-bola, Manampy ny olona manana olana ara-tsaina ny fikambanana, izay manana ny foibeny ao Câmpulung Moldovenesc, Romania efa ho 15 taona izay. Anisan'ireo mpandeha any amin'ny tolotra fitsaboana areti-tsaina ny mpikambana ao amin'ny Blogging Club.
Ny fikambanana, monina ao Câmpulung Moldovenesc, Romania, dia nanampy olona manana olana ara-pahasalamana nandritra ny 15 taona. Ny Blogging Club ao amin'ny tetikasa dia ahitana ny sasany amin'ireo marary saina izay mandray anjara ao amin'ny fikambanana.
Efa nampiofanina tamin'ny alàlan'ny tetikasa amin'ny fomba fampiasana bilaogy, kamera nomerika sy fampidirana sary ireo mpikambana ao amin'ny Blogging Club. Nandalo fotoana fampiharana ihany koa izy ireo izay nampiharan'izy ireo ny fampiasana ny fahaiza-manaony vaovao. Maro amin'ireo mpikambana amin'ny tetikasa no nanomboka ny bilaoginy manokana. Ny tanjon'ny tetikasa Blogging The Dream dia ny hampivelatra bilaogy iray iraisana, amin'ny fanantenana hanampy amin'ny fampihenana ny fanilikilihana atrehin'ny olona marary saina any Romania.
Niala sasatra nandritra ny tapa-bolana ireo mpikambana ao amin'ny Blogging Club ka tsy nanao bilaogy tamin'ny volana lasa nandritra ny fialantsasatry ny Paska. Nandritra izany fotoana izany, niomana ho amin'ny fialantsasatra, izay zava-dehibe amin'ny fiarahamonina Ortodoksa any Romania izy ireo, hoy ny mpitarika ny tetikasa Gabriela Tanasan. Ity sary ity dia mampiseho “ny harona misy mofo sy sakafo hoentinay any am-piangonana amin'ny alahady maraina mba ho voatahy.” Avy eo izahay mihinana izay ao anaty harona. Iray amin'ireo fomba fanaonay amin'ny Paska izany”, hoy izy.
Nilaza koa i Tanasan fa tsy ny fiatoana nandritra ny tapa-bolana no hany zavatra nampihisatra kely ny tetikasa, na izany aza– misy ireo fanamby hafa amin'ny fampivoarana ny bilaogy iraisana. Nilaza fanamby roa manokana izy:
1. The unsteadiness/fickleness of people with mental health problems either because of their health problems or because of the wrong influence from their relatives/family. It is still about prejudices, stigma, the shame of being different.
2. The small number of computers — we have four computers. Only one of them is a new one (that one we bought with the Rising Voices grant) and other three old computers don’t allow us to install all the programs we need to blog…that's why each participant has to wait for another one to finish his/her work on the best computer.
1.Ny faharefoana sy ny tsy faharetana eo amin'ny olona manana olana ara-pahasalamana eo amin'ny saina, na noho ny olana ara-pahasalaman'izy ireo na noho ny fitaomana ratsy eo amin'ny havana/fianakavian'izy ireo. Mbola momba ny fitsarana an-tendrony, fanavakavahana sy ny henatra noho ny fiavahana amin'ny hafa izany.
2. Vitsy ny solosaina — efatra fotsiny. Iray ihany amin'izy ireo no vaovao (iray izay novidianay tamin'ny vatsy ara-bola azo tamin'ny Rising Voices) ary tsy ahafahanay mametraka ny fandaharana rehetra ilaina amin'ny bilaogy ireo solosaina telo efa antitra…izany no mahatonga ny mpandray anjara tsirairay tsy maintsy mifampiandry rehefa hamarana ny asa eo amin'ny solosaina tsara indrindra.
Ny fihaonana farany teo amin'ny Blogging Club
Mampiasa paikady vaovao hampitomboana ny isan'ny mpikambana ao amin'ny Blogging Club i Tanasan. Nanasa ireo mpikambana ao amin'ny vondrona haisoratra ao amin'ny Fikambanana Orizonturi ny tetikasa Blogging the Dream mba hanampy azy ireo hampiroborobo ny kanton'izy ireo amin'ny mpihaino bebe kokoa. Nanomboka tetikasa vaovao tamin'io volana io ihany koa ny fikambanana, izay antenain'i Tanasan fa hisarika olona maro kokoa mba handray anjara. Antsoina hoe “Traveling Beyond Barriers,” fisantaran'andraikitra hampitomboana ny fampidirana ara-tsosialy ireo mpampiasa ny tolotra fitsaboana marary saina ilay fandaharana. Mikasa hanao fitsangatsanganana tontolo andro isam-bolana ny vondrona, miaraka amin'ny fifantohana ara-panabeazana manokana, tahaka ny jeografia, zava-kanto sy ny tontolo iainana. Tsy maintsy mandrakitra ny traikefan'izy ireo amin'ny alalan'ny sary, lahatsary, fanaovana sary na fanoratana lahatsoratra ireo mpandray anjara ary hamoaka izany ao amin'ny bilaogin'izy ireo.
Na dia eo aza ny fanamby atrehin'i Tanasan sy ny mpikambana hafa ao amin'ny Blogging the Dream, maro ireo midera ny asa goavan'izy ireo. Ohatra, nilaza momba ny fikambanana tahaka izao i Mara, mpilatsaka an-tsitrapo teo aloha tao amin'ny Peace Corps izay nandray anjara tamin'ny gazetibokin'izy ireo, “A FI – TO BE,”:
My time in Romania gives me hope regarding the state of mental health advocacy in the world. The Horizons Foundation recognizes that the best changes in policy start locally and at the level that matters most: mental health users and their families. The long CV of projects of Horizons testifies to the fact that the Foundation is making a world impact at the local level every day.
Manome fanantenana ho ahy amin'ny fiarovana ny olona marary saina manerantany ny fotoanako tao Romania. Manaiky ny Horizons Foundation fa manomboka eo an-toerana ny fanovana tsara indrindra amin'ny politika momba izany sy eo amin'ny ambaratonga mety aminy indrindra: ireo mpampiasa ny tolotra fitsaboana marary saina sy ny fianakaviany. Manaporofo ny zava-misy ny CV lava be momba ny tetikasan'ny Horizons fa mampisy fiantraikany isan'andro manerantany eo amin'ny sehatra eny ifotony ny ataon'ilay Orina Mpanasoa.
15 ora izayEoropa Afovoany & Atsinanana